लाज जोगा सरकार ! |
लाज जोगा सरकार !
प्रकाशित मिति :2018-07-31 13:32:48
बलात्कारका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् । महिला तथा बालिकामाथि भइरहेका बलात्कारका विभत्स घटनाले महिलाहरूमा लैंगिक तथा यौनिक हिंसाको त्रास बढाएको छ ।
देशको आधा भन्दा बढी संख्यामा रहेका महिलाहरूलाई हिंसाको त्रास र आतंकको चंगुलमा राखेर शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र समृद्धिको कुरा गर्नु निरर्थक हो । देशकै लागि लज्जाको विषय हो ।
बलात्कारका श्रृंखला एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । यही वर्ष मात्रै नवलपरासीमा बुबा जस्तो पहिलो संरक्षकबाट ८ महिनाकी बालिका बलात्कार भइन् ।
कैलालीमा आफ्नै सहकर्मीले सामूहिक बलात्कारपछि एक युवतीको विभत्स तरिकाले हत्या गरे । कञ्चनपुरमा यसै हप्ता १३ वर्षकी किशोरी बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परिन् ।
दोषी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । जुन विषयलाई लिएर कञ्चनपुरमा आज पनि आन्दोलन जारी छ । अछाममा आफ्नै काकाको छोराबाट ८ वर्षकी बालिका बलात्कृत भइन् । हिजो सोमबार मात्रै बाँकेमा ८ वर्षकी बालिका करणी गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा ६५ वर्षका वृद्ध पक्राउ परे ।
प्रतिनिधीमूलक घटनाको रुपमा मात्रै प्रस्तुत यी घटनाले देशमा कुनै पनि उमेर र अवस्थाका महिला सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ ।
महिलाहरू आफ्नै बुबा, दाजु, सहकर्मी र अपरिचितबाट बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको सिकार हुनुपरेको छ । यसले देशको शान्ति सुरक्षाको खिल्ली उडाएको छ ।
सरकार र सरोकारवाला पक्षले महिला अधिकारको पक्षमा राम्रो गरेको र भएको दावा गरिरहेका बेला यी र यस्ता घटनाले भने सरकारलाई नै गिज्याइरहेको आभास हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार २०७४ साउनदेखि २०७५ असार मसान्तसम्म मात्रै देशमा १ हजार ४ सय ८० महिला बलात्कृत भएका छन् । डरलाग्दो पक्ष त झन् के भने, बलात्कृत महिलामाथि समाजले गर्ने अपहेलना र लोकलाजका कारण अधिकांश बलात्कारका घटना सार्वजनिक नै हुँदैनन् ।
सकेसम्म गाउँकै भद्र भलाद्मीहरू बसेर मिलापत्र गरिदिन्छन् । र अपराधीले उन्मुक्ति पाउछन् । जुन कुरा प्रहरी समक्ष पुग्दै पुग्दैन । यतिमात्रै होइन, विडम्वनाको कुरा त के छ भने कतिपय ठाउँमा स्वय् प्रहरीकै रोहबरमा समेत बलात्कारमा मिलापत्र भएका समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् । यो अर्को चिन्ता र चासोको विषय हो ।
समाजले बलात्कारीलाई होइन बलात्कृतलाई नै प्रश्न सोध्छ कि, तिमी बलात्कृत किन भयौं भनेर । परिवार र समाज बलात्कारीलाई दण्डित गर्न होइन, उम्काउन कोसिस गर्छन् । पद र पहुँचमा भएका व्यक्तिहरू अपराधी छुटाउने होडमा लाग्छन् । जसका कारण बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध मौलाइरहेको छ ।
बलात्कार विरुद्ध भएका कानुन कडाईका साथ कार्यान्वयन नहुनु नै बलात्कार बढ्नुको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । दण्डहिनता अन्त्य गर्ने सामूहिक आवाज नउठेसम्म कुनै पनि उमेर, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका महिला र बालिका सुरक्षित हुन सक्दैनन् ।
त्यसकारण देशको शान्ति सुरक्षा र समृद्धिको कुरा तबसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन जबसम्म यो देशका आधा भन्दा बढी संख्यामा रहेका महिलाहरूले भयरहित वातावरणमा बाँच्न सक्दैनन् । यसका लागि प्रहरीको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्छ । अपराधी छुटाउन दबाब दिने नेताहरूका बारेमा प्रहरी बोल्न सक्नुपर्छ ।
कार्य बोझको डरले बलात्कार मुद्दा दर्ता समेत नगर्ने प्रहरीलाई तत्काल कार्वाही हुनुपर्छ । अपराध गर्ने र अपराधी जोगाउने जोसुकै होस् कानुनी कार्वाहीको भागेदार हुनैपर्छ ।
अतः नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको लैंगिक हिंसाबाट सुरक्षित भई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने महिला तथा बालिकाको मौलिक हकको प्रभावकारी उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्नका लागि समाजमा विकराल बन्दै गएको लैंगिक तथा यौनिक हिंसाको श्रृंखलाको क्रमभंगता हुनुपर्छ ।
बलात्कारी कसैको छोरा, बुबा, दाजुभाई हुन सक्दैन । अपराधी दण्डित हुनुपर्छ । पीडितले सामाजिक तथा कानुनी न्याय पाउनुपर्छ । त्यसो भएमात्रै बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा कमी आउन सक्छ । र, सरकारले आफ्नो लाज जोगाउन सक्छ ।